G-Mail အကောင့် ဖောက်နည်း အသစ် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » G-Mail and G-talk အကြောင်း » G-Mail အကောင့် ဖောက်နည်း အသစ်
By နေမင်းမောင်8:18 PM43 comments
ကျွန်တော်လည်း စာရေးတဲ့ ဖက်ကို မလှည့်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပါပြီ .. ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် G-Mail အကောင့်ကို ဘာကုဒ်မှ ထည့်စရာမလိုပဲ အလွယ်တကူ ဖောက်လို့ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ရေးပေးပါမယ် .. နောက်ပိုင်းတော့ အတက်နိုင်ဆုံး အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ ပိုစ်တွေ ရေးပေးသွားနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားသွားပါမယ် .. အခုအကောင့် ဖောက်နည်းက အရင်တုန်းက G-Mail အကောင့် ဖောက်ရတာထက် လွယ်ပါတယ် .. ပုံစံလေးတော့ နည်းနည်း ပြောင်းသွားပါတယ် .. ကျွန်တော် အဆင်ပြေအောင် အောက်မှာ တစ်ဆင့်ချင်း ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ..
အရင်ဆုံး အကောင့်တစ်ခု ဖောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖြည့်ဖို့အတွက် ကျွန်တော် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်လေးကနေ သွားလိုက်ပါ ..
အပေါ်က လင့်အတွင်း သွားပြီးပြီး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြထားသလို အဆင့်ဆင့် သွားပြီး အလွယ်တကူ လုပ်ယုံပါပဲ ..
ကျွန်တော် အောက်မှာ နမူနာ ပုံစံ ဖြည့်ပြထားပါတယ် .. ဖြည့်ပြီး သွားပြီဆိုရင်တော့ Next Step ပေးလိုက်ပါ ..
အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ Get started ကိုဆက်ပြီး နှိပ်လိုက်ပါ ..
အောက်ကပုံအတိုင်း G00gle Home Page ကိုရောက်သွားပြီ ဆိုရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း G-Mail ကို Click ပေးလိုက်ပါ ..
အောက် ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင် Continue tore new look ကို ဆက်ပြီး Click ပေးလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ G-Mail အကောင့် တစ်ခုကို လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ ဖောက်လို့ ရသွားပါလိမ့်မယ် ..
sayar ye January 9, 2012 at 7:28 AM
စိမ့်စမ်းရေ January 9, 2012 at 10:20 AM
အကိုရေ..အကောင့်သစ်ဖောက်တာအဆင်ပြေတယ် အရမ်းကိုကျေးဇူးပါနော်.. ညီမတို့လို ကျောင်သားတွေကို အကောင့်ပေး၇သူတွေက အကောင့်သစ်ရဖို့ဆိုရင် မနည်းကိုကြိုးစား၇တာ.. ခုတော့ တစ်ကယ်အဆင်ပြေပါတယ်..
သမီးရဲ့ဆိုဒ်လေးမှာလည်း ပြန်လည်ဝေမျှထားပါတယ်.. ခွင့်ပြုပေးပါနော်.. အားလုံးသိရအောင်ပါ... ကျေးဇူးတင်လျက်...
Junemoe January 9, 2012 at 10:54 AM
အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ အခုဆို အကောင့်တစ်ခု လွယ်လွယ်နဲ့လုပ်နည်းသိသွားတယ်။
www.pakokkufighterkaunglay.com January 9, 2012 at 1:30 PM
color7 video converter ကို download လုပ်လိုက်ပြီ၊ ဒါပေမဲ့ key လိုမလိုကိုသိချင်တယ် ကိုနေမင်း ရလား
Harry January 9, 2012 at 8:09 PM
အစဉ်ပြေပါသည်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာနောက်တစ်နည်းရှိပါသေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။မျှော်။
WOUND (OR) LEGEND January 9, 2012 at 8:25 PM
ငါ့ကိုရေ တစ်ခုဖာက်တာရတယ် နောက်တခုလုပ်တော့မရတော့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပေးပါဦး။
hanwaisoe January 11, 2012 at 3:33 AM
Anonymous January 11, 2012 at 10:46 PM
Anonymous January 12, 2012 at 12:59 PM
Anonymous January 12, 2012 at 1:17 PM
ဝင်းထွန်း January 14, 2012 at 4:01 AM
အော် ဆရာ ရယ် အ ကောင့် ဖေါက် တယ် ဆုို လုို့ hack တာ ထင် ပြီး လန့် တောင် သွား တယ် ကုိုယ့် မေး ဘောက် စ် ဟက် ခံ ရ မှာ တောင် စုိုး ပြီး ပိတ် ပြစ် ရ တော့ မ လုို လုို ဖြစ် သွား တယ်
ဖွင့် တယ် လုပ် ပါ ဆရာ ရယ် တ က တည်း လန့် တောင် လန့် တယ် thanks စေ ချင် ရင် သန့် ပါ တယ် ဗျာ။
paji80@gmail.com January 16, 2012 at 11:34 AM
အကောင့်ဖောက်နည်းအသစ်ကို သိရတာ အရမ်းပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ နောက်လည်း လွယ်ကူသက်သာတဲ့ နည်းပညာများရှိရင် ဝေမျှပါဦးနော်။ နေမင်းလည်း လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေနော်။
i can't,That tell me to get verification code.
Anonymous January 18, 2012 at 11:16 PM
ရဲသော်သော် January 22, 2012 at 9:14 AM
ကျွန်တော်က hack တယ်ထင်လို့..
မီမီအောင် January 23, 2012 at 3:18 PM
အစ်ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ အစ်ကိုလို မပြောနိုင်ပေမယ့် အစ်ကို ၀က်ဆိုဒ်ကို ပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ နောက် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ပြောပြမယ်လေ အကောက် လုပ်တာတင် မဟုတ်ပဲ ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Tigrex January 31, 2012 at 7:03 PM
yewinswe February 16, 2012 at 5:33 PM
I am Ye Win Swe.
Your help is very useful for me.
g-mail account လုပ်နည်းက အဆင်မပြေဘူးဗျ
ဇေဖြိုး February 22, 2012 at 12:07 PM
Anonymous March 9, 2012 at 10:24 PM
Thanksamillion,bro.
tunnaing March 18, 2012 at 6:07 PM
Zaw Htet April 12, 2012 at 10:00 PM
လုပ်တော့ မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူးခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ခုလို စာအုပ်တွေရော ဗဟုသုတပိုင်းတွေရော စသည်ဖြင့် အားလုံးကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတာကို အရမ်းပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့နာမည်ဇော်ထက်မောင်ပါခင်ဗျာ။
naylinoo979 April 14, 2012 at 5:09 PM
I T စပိုင် May 4, 2012 at 8:12 PM
ဂိုဂဲ စကူရီတီတော်တော်ညံတာဘဲ နော် ခုဖောက်ခုရတယ် :P
aung zin oo May 6, 2012 at 7:04 AM
အကိုဖောက်တာ သူငယ်ချင်းအတွက်တွေရော..ကိုယ့်အတွက်ပါဆို အကောင့်အခု(၂၀)လောက်ရှိ
သွားပြီး..... ညီလေးကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်....ဒီကျေးဇူးတွေကိုလည်း မမေ့ပါဘူးလို့ ဂတိပြုပါတယ်....
zawzawlatt May 23, 2012 at 11:48 AM
G-mail အသစ်ဖွင့်ရန် အခက်ခဲရှိနေသည်။
ကိုဇေလင်း June 24, 2012 at 11:50 PM
အင်း သူများတွေတော့ ရဒယ်ဒဲ့ အနော့်တော့ရဘူး ဗျာ ဘာယို့ယဲမတိဝူးးးးးးးးးးးးး အဆင်ပြေမယ့်လင့်လေးချိယင် မေးမှာ ပို့ပေးပါလား ကိုနေရေ .....
Unknown July 1, 2012 at 2:40 PM
အလွမ် ကိုကို July 9, 2012 at 6:00 PM
ကျေးဇူး အစ်ကိုရေ ကောင့်ကို လိုသလောက် ဖောက်လို့ရသွားပါပြီနော် ..... တစ်ကယ်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ ...
အစိလေး September 18, 2012 at 8:17 PM
အောင် ခြိမ့် January 22, 2014 at 9:43 PM
အောင် ခြိမ့် January 22, 2014 at 9:58 PM
မရတော့ဘူးအစ်ကို တော်တော်ပြောင်းနေပီဗျ နောက်ထပ်ရှိရင်လဲတင်ပေးပါ
Kaung Set September 14, 2014 at 7:35 AM
oakar aung March 2, 2017 at 2:18 PM
ဆရာကိုနေမင်းမောင်ရေ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့FACEBOOK ACCOUNT ကိုစမ်းကြည့်တာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိတော့ဘူးဆရာရေ FB ကိုဝင်ပီးPASSWORD ပေးလိုက်တော့ ကြာနေတယ် ပေါ်လာတော့login approvals code လိုပေါ်နေတယ် mail ကတော့ oakaraung23@gmail.com ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုသနားငဲ့ညာမှုအနေနဲ့ ကူညီပေးပါလို့ကုညီတောင်ဆိုပါတယ်ဆရာကိုနေမင်းမောင်ရေ စာထဲတွင် အမှားပါကပြင်ဖတ်ပေးပါခင်ဗျာ
Men's Health (January/February) 2012
Real Desktop 1.71 Standard
Wondershare Photo Recovery 3.0.3.6
Athtek Skype Recorder v4.5.1.9
USB Safely Remove 5.0.1.1164 Final
Microsoft Office Ebook Collection (Myanmar version...
KMPlayer 3.1.0.0 R2 - 7sh3 LAV 28.01.2012 Build
EXE Password Protector 1.1 Build 1.1.6.214
3G နှင့် 4G ကြားကွာခြားချက်များ
Antivirus uninstallers collection
Topaz Star Effects 1.0.0 for Adobe Photoshop x32/x...
Dolphins 3D Screensaver and Animated Wallpaper 1.0...
MathSol MultiplexCalc v5.4.6-Lz0
Internet Download Manager v6.08 Build9Final
Window7,XP နှင့် Ubuntu DVD Collections and Shar...
DP Animation Maker 2.0.3
Reset Windows Password 1.90
Wondershare Streaming Audio Recorder v2.0.2.0
Windows7တွင် File Sharing ပြုလုပ်နည်း
Firefox မှာ အသံမလာဘူးဆိုရင်
Corel Draw Graphic Suite X4+Keygen
Yamicsoft Windows7Manager v3.0.8.4 (x86/x64)
Easy Poster Printer 4.0.1.0
Platinum Hide IP 3.1.5.6
FastPictureViewer Home Basic 1.7.234 ML
iMacsoft iPhone Photo to PC Transfer 2.8.0 Build 0...
Driver Checker v2.7.5 Datecode 19.01.2012
Photo Makeup Editor 1.85 Full
Windows Loader v2.1 By Daz
A4DeskPro Flash Website Builder 6.10
PC Magazine : Top 100 Web Sites - January 2012
LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization a...
Windows7Manager 3.0.8 Final (x86/x64)
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 3rd Editio...
Yahoo! Messenger 11.5.0.155 Final
USB Flash Security (group) Edition v4.1.5
Driver Genius Pro v11.0.0.1112 + LiveDBUpdater
RonyaSoft CD DVD Label Maker v3.01.09
USB Safely Remove v4.7.1.1153-GOTD
WebcamMax 7.5.8.8 Multilingual
Mask My IP v2.2.4.8
Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.0.1245 (05.01.20...
Your Uninstaller! v7.4.2011.15
Dynamic Auto Painter v2.5.5
CrystalDiskInfo 4.2.0 Alpha 1 Multilingual
WinFolder Lock Pro 1.1 - The Folder Security Solut...
QTranslate 3.1.0 ML + Portable
koobits - Download, Manage And Sync Your eBooks
PhotoInstrument 5.4.545 Multilingual